Iimeko zokuzalela iintlanzi kwii-aquariums | Ngeentlanzi
Ukuzaliswa kwakhona kwentlanzi yetropiki kwi-aquarium
Maria | | Ukuzaliswa kweentlanzi
Kukho iintlobo ezahlukeneyo ezinokuthi zala kwakhona kwi-aquarium ngaphandle kweengxaki ezinkulu. Namhlanje siza kubhekisa kwiimeko ezifanelekileyo zokuvelisa ukuze kuphumelele.
Kuqhelekile ukufumanisa amantshontsho amancinci kwi-aquarium yakho, oku kungakothusa nangakumbi ukuba usaqala ngesihloko. Kungenzeka ukuba sithenge abantu ababhinqileyo beentlobo ezinje ngeGuppy, Lebistes okanye iMollys esele zichumisiwe. Ezi ntlanzi zinobunzima bokufumana ubunzima ngokukhawuleza kwaye ke ziya kuzala umncinci ngaphandle kwethu ukuqaphela.
Ukuba ufuna ukuba nayo isiqinisekiso sokuba iintlanzi ziyakwazi ukuvelisa kwakhona Kuya kufuneka uthenge iintlanzi ezincinci ngokwamaqela, ukuze zenze izibini zendalo. Ungazithenga nangamanani asi-8 ukukhuthaza ukuba zivelise iqela, ke kuya kuba lula kwaye kube nethuba elikhulu lokuphumelela.
Fumanisa ukuba kukuphi ukutya okubonisiweyo kuhlobo ngalunye lweentlanzi, funda ngalo kwaye ufumane iingcebiso malunga neendlela ezahlukeneyo zokuzala zentlanzi oyifunayo. Kubalulekile ukuba ube nalo olu lwazi kwasekuqaleni ukunqanda iingxaki kamva.
Kuya kufuneka uphinde uvelise iimeko ezifanelekileyo zokufuya, ngenxa yoko kufuneka ufumane ulwazi malunga neentlanzi ezikhethiweyo. Ezinye iintlobo zifuna ukuba iinkunzi neemazi zahlukane ngaphambi kokuchumisa, kwezinye iimeko kuyakufuneka ukuba iintlobo zihlale kunye. Elinye lawona manqaku asisiseko kukuba iintlobo zihlala zondlekile.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ukusetyenziswa kwamatye kunye nemithi kwi-aquarium
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukuzaliswa kweentlanzi » Ukuzaliswa kwakhona kwentlanzi yetropiki kwi-aquarium
UJorge roque sitsho
Uqale ekuveliseni kwakhona iintlanzi ze-aquarium kwaye uzixabise kakhulu izimvo zakhe ezakhayo
Phendula Jorge roque
Intlanzi enememori elungileyo